Sida loo sameeyo wicitaan FaceTime ah aaladaha Android ama Windows | Wararka IPhone
Sida loo sameeyo wicitaan FaceTime leh aaladaha Android ama Windows
Miguel Hernández | 25/09/2021 10:00 | macruufka, macruufka 15, iPhone, Casharrada iyo buugaagta
FaceTime wuxuu helay shaqooyin fara badan markii uu yimid macruufka 15 iyo iPadOS 15, waxaan u malayneynaa in isgaarsiinta uu kor u qaaday masiibada ay wax ku leedahay, gaar ahaan haddii aan tixgelinno imaatinka codsiyada sida Zoom oo u rogay adduunka “fadhiidka ah” wicitaanada fiidiyaha ilaa hadda.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee FaceTime ee leh macruufka 15 iyo iPadOS 15 ayaa ah suurtagalnimada in wicitaannada sidoo kale lagu sameeyo aaladaha Android ama Windows si fudud. Nala soo ogow sida ugu dambaysa ee loo sameeyo wicitaannada FaceTime qof kasta, iyadoon loo eegin inay haystaan ​​iPhone, Samsung, Huawei iyo xitaa xagga Windows.
Kani waa astaamo aan si joogto ah uga hadalnay kanaalkayaga YouTube, ee ku jira macruufka 15 talooyin iyo fiidiyowyo fiidiyow waxaad ku arki kartaa sida ugu habboon ee looga faa'iidaysan karo shaqadan. Dhab ahaantii la -xiriirka dadka isticmaala Android ama Windows iyada oo loo marayo FaceTime waa wax la yaab leh oo fudud, waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad samayso waa furitaanka FaceTime oo shaashadda guriga waxaad ku arki doontaa badhanka bidixda sare oo leh: Samee xiriir. Haddii aan gujinno badhankaas, menu -ka noo oggolaanaya inaan la wadaagno xiriirada FaceTime codsiyada kala duwan ayaa furmi doona.
Sidoo kale, hoosta waxaan ka helnaa sumadda cagaaran oo leh: Ku dar magac. Sidan ayaan cinwaan gaar ah ugu dari karnaa isku -xirka FaceTime oo u fududaynaynaa adeegsadayaasha hela inay aqoonsadaan. Waxaan ku wadaagi karnaa iskuxirka FaceTime codsiyada ugu waaweyn sida Mail, WhatsApp, Telegram ama LinkedIn. Shaqada AirDrop xitaa waxay ka muuqataa suurtagalnimada gudaheeda, wax aan waligeed joojin inay iga yaabiso aniga oo tixgalinaya in loogu talagalay aaladaha aan Apple ahayn AirDropna kuma habboona kuwaan.
Taasi waa sida ugu fudud ee aad ugu abuuri karto kalfadhiga FaceTime isticmaale kasta iyadoon loo eegin inay adeegsadaan macruufka, iPadOS, macOS, Android ama Windows.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » Sida loo sameeyo wicitaan FaceTime leh aaladaha Android ama Windows
Cinwaanku waa inuu dhahaa:
Ku socota aaladaha Android ama Windows »
"Aaladaha Android ama Windows"
Tani waxay ku habboonaan lahayd fikradda maqaalka.
Apple wuxuu sii daayaa macruufka 12.5.5 ee iPhones -ka iyo iPad -yada Dhaxalka ah si loo hagaajiyo Ka faa'iideysiga Pegasus
Apple waxay ka fikiraysaa inay rogto iPad Pro oo ka dhigto mid siman